कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपायबाट पाउनुहोस् छुटकारा !! | सुदुरपश्चिम खबर
कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपायबाट पाउनुहोस् छुटकारा !!
कपाल झर्ने स’मस्याबाट धेरै मानिसहरु चिन्तित हुन्छन् । विभिन्न कारणले क’पाल झर्ने स’मस्या पैदा हुन्छ । तर, गम्भीर रो’गका कारण क’पाल झर्ने स’मस्यामा बाहेक घरेलु विधि अपनाएर यसको समाधान गर्न सकिन्छ ।
अमलाको जुसः अमलामा ट्यानिन र क्या’ल्शियम जस्ता पदार्थ पाइन्छ । यो दुवै पदार्थ कपाल बढ्न मद्दतगार हुन्छ । र यो क’पालको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । कपालको जरामा अमलाको रस लगाउनुस् र ३० मिनेटसम्म लगाउनुस् । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक लगाउनुस् ।
प्याजको रसः प्याजको रसले क’पालमा यसको वृद्धिका लागि अतिरिक्त सल्फर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा कपाल झर्न रोक्ने काम गर्छ । आधा प्याजको रस निकाल्ने र कपालको जरामा लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्ने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्दा क’पाल झर्ने स’मस्यामा कमि आउँछ ।
मेथी हेयर मास्कः मेथीको दानामा प्रोटिन र निकोटिनिक एसिडको मात्रा उच्च मात्रामा पाइन्छ । यसले क’पाल झर्न र रुखो हुनबाट बचाउँछ । आधा कप मेथीको दाना रातभर भिजाउने र पेस्ट बनाएर कपालको जरामा लगाउने गर्नुपर्छ । मेथीको पेस्ट लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा एकपटक लगाउनुपर्छ ।
नरिवलको तेलः नरिवलको तेल कपालको वृद्धि विकासमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । हप्तामा दुई पटक नरिवलको तेलले मालिस गर्ने गर्नुपर्छ जसले कपाल मजबुत बनाउँछ । (urlabarinews.com बाट सभार)
औषधीय गुणले भरिपूर्ण तिते करेलाले यी रोगहरु निको पार्छ !
आइतबार सूर्य देवको व्रत कसरी बस्ने ? (मन्त्रसहित)